Oem ပလတ်စတစ်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု China Manufacturers & Suppliers & Factory
မဂ္ဂနီစီယမ် Die ကာစ်
လူမီနီယမ် Die ကာစ်
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001
မဂ္ဂနီစီယမ် Die ကာစ်
semi Solid သေကာစ်
Precision Mg ကာစ် Die
mg အလွိုင်းအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကာစ် Die
လူမီနီယမ် Die ကာစ်
မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု Casting Die
မြင့်မားသော Precision မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
ပလပ်စတစ် Injection ကိုပလပ်စတစ်မှို
မဂ္ဂနီစီယမ် Die ကာစ်
လူမီနီယမ် Die ကာစ်
Oem ပလတ်စတစ်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Oem ပလတ်စတစ်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု ထုတ်ကုန်များ)
Supply နိုင်ခြင်း: 5000sets/Week
min ။ အမိန့်:2Piece/Pieces
ကြီးမားတဲ့မော်တော်ကားထုတ်ကုန်မှို၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းသည်မော်တော်ကားသေ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းအမြီးပန်းကန်၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်များ၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်မှိုများအတွက်မှို, ထိုကဲ့သို့သောစားသုံးမှုကင်၏ထုတ်လုပ်မှုအဖြစ် panel ကမှို၏မှိုဖြစ်ပါတယ် ဆီမီးခွက်ကိုင်ဆောင်သူ။ စိတျအပိုငျးမြား၏ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုလည်းတိုးတက်နေကြသည်,...
အသေးစားအစိတ်အပိုင်းများ Casting OEM အမြင့်စွမ်းဆောင်ရည် Semi-Solid သေ
Supply နိုင်ခြင်း: 1000000sets/Month
min ။ အမိန့်: 1500+ Bag/Bags
မဂ္ဂနီစီယမ် Process ကို Casting Die ကြောင့် Cast ၏မြင့်မားသောအသံအတိုးအကျယ်ထုတ်လုပ်များအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုအောင်, မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရှုထောင်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူအဖန်ဖန်ထပ်ခါတလဲလဲနိုင်ပါသည်။ ဒီဇိုင်း ချ....
OEM စိတ်ကြိုက် DieCasting Laptop ကိုများအတွက်ထိပ်တန်းအခြေစိုက် Frame
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းမှတ်စုစာအုပ်ဘောင်, မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းလက်တွေ့သတ္တုအတွက်အပေါ့ပါးဆုံးသတ္တုဖြစ်ပြီး, အပြောင်းအလဲနဲ့အထူထက်ပို 0.3mm ဖြစ်ပါသည် ဒါဟာမျက်နှာပြင်ပက်ဖြန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်အရောင်သို့လှည့်နိုင်ပါတယ်နှင့်လက်တော့ကွန်ပျူတာထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ဓာတ်တိုးဓာတုပြောင်းလဲခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့ wear...
OEM မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအော်တိုများအတွက်အစိတ်အပိုင်းများ Casting Die
မော်တော်ယာဉ်, ကာကွယ်ရေးသို့မဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုများပုံသွန်း applications များ၏မကြာသေးမီကဆက်လက်တိုးချဲ့, အာကာသ, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, နှင့်အာဏာ tools တွေလေဟာနယ်သေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း, အနိမ့်ဖိအားသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း,...
ချောထုတ်ကုန်များ၏ 90% အနည်းဆုံးသတ္တုသတ္တုများပုံသွန်းဆံ့။ သတ္တု Cast ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးရန်အလွန်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တစ်ဦးချင်းစီသေဆုံး-casting ထုတ်လုပ်သူအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောနည်းပညာများနှင့်အတူ Semi-အစိုင်အခဲ Cast ထုတ်လုပ်တင်းကျပ်သောအလွိုင်းစံချိန်စံညွှန်းမှလိုက်နာစောင့်ထိန်း။...
OEM အမြင့် Precision အလွိုင်း Iindustrial အစိတ်အပိုင်းများ Casting Die
OEM အမြင့် Precision အလွိုင်း Iindustrial အစိတ်အပိုင်းများ Casting Die, မဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုစပ်ထိုကဲ့သို့သောဒါအပေါ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အီလက်ထရောနစ်စက်မှုလုပ်ငန်း, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလယ်ပြင်, စစ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အမျှနယ်ပယ်တစ်ခုကျယ်ပြန့်အတွက်အသုံးချခဲ့ကြ။...
OEM စိတ်ကြိုက် Precision ဖိအားအလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ Casting Die
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းစက်မှုလက်တွေ့ကျတဲ့သတ္တုအတွက်အပေါ့ပါးဆုံးသတ္တုအဖြစ်သာစက်မှုဇုန်ထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမယ့်လည်းထိုကဲ့သို့သောမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်း tableware အဖြစ်, အိမ်မှာကုန်ထုတ်လုပ်မှုအသကျရှငျအတှကျသငျ့လျြောသော။ အစာရှောင်ခြင်းအပူလွန်ကျူး, အလင်းအရည်အသွေး, ကောင်းသောမာကျောမှု,...
OEM အမြင့်ဖိအား Cast ကို Components Casting Die
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များသည်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်ကူညီဖိအားသေ Cast ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အတွက်နျဆာပဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကား Cast ကျွန်တော်တို့ရဲ့ State-Of-The-Art အခြေခံအဆောက်အအုံမှာအက high-quality ကုန်ကြမ်းကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။...
OEM အမြင့်အိမ်ခြံမြေစက်မှု Components Casting Die
စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရှေ့ဆောင်တွေ, ကျနော်တို့ Components Casting Die စက်မှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်။ ပူဇော်သက္ကာကိုသတ္တုများပုံသွန်းကျယ်ပြန့်သူတို့၏မြင့်ဖိအားနှင့်အပူချိန်ကိုခုခံဘို့ငါတို့ client များသဖြင့်တန်ဖိုးထားသည်။ အဆိုပါသေ Cast ကိုမှို,...
OEM စိတ်ကြိုက် LED Lighting ထုတ်ကုန်များအတွက် Casting Die
ကြောင့်လျင်မြန်စွာမြို့ပြနှင့်စက်မှုရန်, အလင်းမော်တော်ယာဉ်များနှင့်အသစ်အဆောက်အဦများအတွက်ကမ္ဘာ့ဝယ်လိုအားတိုးမြှင့်သည်နှင့်နောက်လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းသိသိသာသာတိုးတကျမှုရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ စက်မှုနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍများနှင့်ထွန်းသစ်စစီးပွားရေးအတွက် Light-အလေးချိန်,...
OEM စိတ်တိုင်းကျအလွိုင်းသံမဏိ Precision အပိုင်း Casting Die
State-Of-The-Art အသံကအခြေခံအဆောက်အဦများကထောက်ခံကျနော်တို့လူမီနီယံသေ Cast နှင့်အင်ဂျင်အပိုအစိတ်အပိုင်းများကိုဆက်ကပ်။ ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာအရည်အသွေးမြင့်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောအရည်အသွေးမြင့်လူမီနီယံသတ္တုစပ်တွင်ဤဘားထုတ်လုပ်။ ဤရွေ့ကား Cast...
စိတ်ကြိုက်လျှပ်စစ်ပိုအပိုင်း OEM Mag ကာစ် Die
အဆိုပါသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းကာစ်တင်ဘို့လူမီနီယံအမြဲတမ်းမှိုများအတွက်ဝယ်လိုအားကြောင့်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက်၎င်း၏အဆုံးအသုံးပြုမှုကိုလျှောက်လွှာမှကြီးထွားလာသည် 2016 အတွက်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်ဝေစု၏ 49,7% အဘို့မှတ်။...
သေကာစ်စက်ရုံနှင့်အတူ OEM လူမီနီယမ်ထုတ်ကုန်များ
လူမီနီယမ်ဖိအားကုန်ပစ္စည်းများ Casting Die ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်အရည်အသွေးအခြေခံပစ္စည်းများနှင့်ခေတ်ပြိုင်နည်းပညာအသုံးချဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်သည့်မြောက်မြားစွာသတ်မှတ်ချက်များ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဌန်သည်။...
OEM Precision ပလတ်စတစ် Electroplating ထုတ်လုပ်မှုစက်
Electroplating သူတို့အနေနဲ့လျှပ်ကူးပစ္စည်းအပေါ်တစ်ဦးပါးလွှာဆိုနိုင်ပါတယ်သတ္တုအပေါ်ယံပိုင်းဖွဲ့စည်းနိုင်အောင်ကပ်သီးကပ်သတ်သတ္တုစုံလုံလျှော့ချရန်လျှပ်စစ်လက်ရှိအသုံးပြုတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Electroplating အဓိကအား (ထိုကဲ့သို့သောပွန်းပဲ့အဖြစ်နှင့်ခုခံဝတ်ဆင်, ချေးကာကွယ်မှုချောဆီကို, ဗေဒအရည်အသွေးတွေ) object...
OEM ကို ABS ပလတ်စတစ် Coating Process ကို PC ကိုကြွက်အိမ်ရာ
ကျယ်ပြန့်အိမ်သုံးပစ္စည်းထုတ်ကုန်များ, အိုးအိမ်များနှင့်မော်တော်ယာဉ်နှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုကို ABS ပလပ်စတစ်။ Ketone, benzene နှင့်ကို ABS ပလပ်စတစ်၏အရည်ပျော်ပစ္စည်းဖျက်သိမ်းကို ABS ပလပ်စတစ်, အရက်နှင့်ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်ဖျက်သိမ်းရေး၏အရည်ပျော်ပစ္စည်းနိုင်စွမ်း Ester...
OEM မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းစိတ်ကြိုက်အစိတ်အပိုင်းများ Designs Casting Die
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းပန်းကန်နှင့်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါသေးငယ်တဲ့သိပ်သည်းဆမြင့်မားတိကျတဲ့ခွန်အားကောင်းသောလျှပ်စစ်သံလိုက်ဒိုင်းလွှား, လွယ်ကူသောအပြောင်းအလဲနဲ့, ကောင်းသော damping စွမ်းဆောင်ရည်၏အားသာချက်များရှိသည်။ ထိုသို့သောဒါအပေါ်ခေတ်သစ်အာကာသ, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး, မော်တော်ကား,...
OEM စိတ်တိုင်းကျရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Die Cast ကို Process ကို Casting
စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် Dongguan စီးတီး Ruizhun Precision ကျနော်တို့လူမီနီယမ် Cast အစိတ်အပိုင်းများ Die နှင့်အတူကိုင်တွယ်။ ပူဇော်သက္ကာကိုသတ္တုများပုံသွန်းကျယ်ပြန့်သူတို့၏မြင့်ဖိအားနှင့်အပူချိန်ကိုခုခံဘို့ငါတို့ client များသဖြင့်တန်ဖိုးထားသည်။...
OEM စိတ်တိုင်းကျနူးညံ့သိမ်မွေ့စတိုင်သတ္တု Optical မျက်လုံးမျက်မှန်
အဆိုပါသတ္တု Casting စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအပြည့်အဝနောက်ထပ်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းသို့ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ ဤသည်၌, အသေ-သွန်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု၏ 80% ကိုဝယ်ယူသောမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ, အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဤရွေ့ကားကြံ့ခိုင်ဆောက်လုပ်ရေး, ချေးခုခံနှင့်အခြားသူတို့ရဲ့ features...
OEM Precision မဂ္ဂနီစီယမ်အစိတ်အပိုင်းများဖုန်းဖြစ်ရပ်မှန် Casting Die
စက်မှုသေကာစ်တိကျတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များဖို့သတ္တုများပုံသွန်းစိတ်ကြိုက်လွယ်ကူအောင်, ရှုပ်ထွေးသောဒီဇိုင်းများနှင့်ပုံစံများကို၏ဆည်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူမီနီယံ Casting န်ဆောင်မှုအင်ဂျင်နီယာများ, ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်နာများနှင့်ဗိသုကာ State-Of-The-Art...
ဖုန်းဖြစ်ရပ်မှန်များအတွက် OEM Precision သတ္တုတံဆိပ်ထုအစိတ်အပိုင်းများ
ဖောက်သည်များ၏ကွဲပြားတောင်းဆိုချက်များကိုတက်ကိုက်ညီဖို့ကျနော်တို့ Precision တံဆိပ်ထုအစိတ်အပိုင်းများ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းရာပူဇော်သက္ကာကိုအတွက်စေ့စပ်နေကြတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ပံ့စာရွက်သတ္တုတံဆိပ်ထုအစိတ်အပိုင်းများအသေးစိတ်က၎င်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်သေချာစေရန်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုများအဖွဲ့ကစမ်းသပ်စစ်ဆေးသည်။...
OEM Smart Watch သို့ပြန်သွားရန်ဖုံးများအတွက် Casting Die
အဆိုပါကုမ္ပဏီနှစ်ပေါင်းများစွာများအတွက်တိကျသေဆုံး-casting စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စေ့စပ်ခဲ့ပြီးအတွေ့အကြုံရှိထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်သေဆုံး-casting ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အင်ဂျင်နီယာချုပ် Casting Die သိရသည်။...
လူမီနီယမ်အဘို့အ OEM ဝန်ဆောင်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာစ် Casting Die
ပစ္စည်းများအမျိုးမျိုးအမြဲတမ်းမှိုကာစ် Method ကိုများစွာသောအမျိုးမျိုးမှတဆင့်ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, (အဖြစ်ကောင်းစွာနဲ့သတ္တုစပ်) သတ္တုလမ်းပိတ်ထားသို့မဟုတ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးမော်တော်ယာဉ်များ, လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပင်ကစားစရာချွတ်,...
OEM စိတ်ကြိုက် LED Lighting အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ Casting Die
ကျနော်တို့ CNC စက်ပိုင်းဆိုင်ရာများအတွက်, အကြမ်းခံတိကျသောနှင့်ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုဘဝပေး။ ဤရွေ့ကား Cast စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိတွေ့ဆုံရန်နဲ့ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်မြင့်မားသောဗို့အား application များအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။...
OEM Precision မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကာစ် Die
မဂ္ဂနီဆီယမ်သေ Cast ၏အားသာချက်များနေသောခေါင်းစဉ်: ခြွင်းချက်ပါးလွှာသောမြို့ရိုးစွမ်းရည်, ကောင်းမွန်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ချေးခုခံ, ကောင်းမွန်သောပြီးဝိသေသလက္ခဏာများ, အပြည့်အဝ Recycle ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုစပ်များကိုစက်မှု Properties ကိုအချောထုတ်ကုန်များ၏အသက်, အစှမျးသတ်တိနှငျ့ခြုံငုံ function...
အကြီးစားအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ Injection ကိုမှို
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ရှဲလ်အစိတ်အပိုင်းများ Injection ကိုမှို
OEM မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် Frame ကဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် Casting Die
ရှင်းလင်းသူများ shell ကိုပလပ်စတစ်တန်ဆာ
အစိတ်အပိုင်းများ Percision မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Laptop ကိုများအတွက် Die နှမြော
မော်တော်ယာဉ်ဘမ်များအတွက် injection မှို
PC အတွက် OEM Precision Semi-Solid သေကာစ် Keyboard ကို
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Shell က Laptop ကို
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ ချ. သေဆုံး
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ Casting semi Solid သေ
OEM အမြင့် Precision Brightness ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း Injection ကိုတန်ဆာ
ကားတစ်စီးလော်စပီကာ shell ကို Injection ကိုတန်ဆာ
 လိပ်စာ:A: No. 198 Xinyi Road, Jing Lian Industrial Zone, Qiaotou town, Dongguan, Guangdong； B: No. 17, Chang Tang Road, Yan Tian Village, Fenggang Town, Dongguan, Guangdong, Dongguan, Guangdong
မူပိုင်ခွင့်© 2020 Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. All rights reserved ။